यस्तो छ दुईवटा लिंग भएका व्यक्तिको आत्मकथा ! « Light Nepal
यस्तो छ दुईवटा लिंग भएका व्यक्तिको आत्मकथा !
Published On : 13 February, 2018 2:35 pm
जोन त्यो चिकित्सकीय स्थितीका शिकार हुन् जो जो संसारभरमा निकै कम मानिसहरुलाई हुने गर्दछ ।
यो रोगको चिकित्सकीय नाम डिफालिया नामक रोगबाट ग्रसित उनी बाइसेक्सुअल हुन् । उनका १० इन्च लम्बाईको दुईवटा लिङ्ग छन् । एकवर्ष पछि ती १७ हजार कमेन्ट एउटा जीवनीको रुपमा तयार भइसकेको छ । यो जीवनी किताबको रुपमा प्रकाशित भएको छ । किताबको नाम ‘डबल हेडरः माइ लाइफ विथ टू पेनिसेस’ हो ।
manएक हजार मानिससँगको सेक्स उक्त जीवनीमा प्रकाशित भएको सबैभन्दा रोचक तथ्य भनेको उनले अहिलेसम्म एक हजारभन्दा बढि महिलाहरुसँग सेक्स गरिसकेको छन् । जोनका अनुसार उनले यो जीवनी यसकारण लेखे किनभने उनी जहाँ जान्छन् मानिसहरुले उनको अगाडि सयौँ प्रश्नहरु तेर्सांउने गर्दछन् । यो जीवनीबाट उनले ती सबैले प्रश्नहरुको जवाफ दिने आशा गरेका छन् । जोनका अनुसार उनले कुनैबेला आफू निकै एक्लो महसुस गर्ने गरेको बताउँदै आफ्नो बाल्यपन कसरी बित्यो त्यो उनलाई मात्र थाहा भएको दुखेसो पोखे । हरेक दिन साथीहरुसँग खेल्न जाँदा उनीहरुको कुरा बाँड झैँ बिझ्ने गरेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘मलाई आफ्नो संसार निकै खराब लाग्न थालेको थियो तर फेरि युवा अवस्थामा आइसकेपछि जब एकदिन मेरो एकजना महिलासँग नजिकिँए तब हामी निकै नजिक भयौँ । मेरो दुईवटा लिङ्ग देखेर उनी चकित परिन् । त्यसपछि के भयो म यहाँ बताउन सक्दिनँ तर यो वास्तविकता हो कि म बिस्तारै बिस्तारै पुरुषहरुप्रति पनि आकर्षित हुन थालेँ ।
त्यसपछि यो मेरो व्यवसाय नै बन्यो ।’ के थियो आखिर जोन पहिला बताउँदैनन् जोन लेख्छन्, ‘म जब कुनै पनि महिला वा पुरुषको सम्पर्कमा आउँछु र बिस्तारै सम्बन्ध बनाउन थाल्छु तब म कसैलाई पनि मेरो दुईवटा लिङ्ग भएको कुरा बताउँदिन् । म पहिला डेटमा जान्छु । त्यसपछि जब एक रात बिताउने कुरा आउँछ तब अर्का व्यक्तिको अनुहारको भाव सामान्य हुन्छ जुन अरु मानिसहरुको हुने गर्दछ ।’ जोन अझ थप्छन्, ‘वान नाइट स्ट्यान्डको बेला मानिसहरुलाई अचम्मित पार्नुको मजा नै भिन्नै छ । महिलाहरुको सुरुमा अनुहारको भाउ कस्तो मानिससँग रात बिताउन आएछु भन्ने प्रकारको हुन्छ । यद्यपी मेरो हिस्ट्रिमा जतिपनि मानिसहरु आए तीमध्ये धेरैजसो स्ट्रेट फरवार्ड रहे र उनीहरु मसँग यौनसम्बन्ध बनाउनमा निकै उत्सुक रहे । ’
यसका साथसाथै जोनले आफ्नो जीवनीमा ती रातहरुको बारेमा पनि खुलासा गरेका छन् जुन उनका लागि अविष्मरणीय रह्यो । दुईवटा लिंग भएका जोन लेख्छन्, ‘एकपटक म एकजना महिलासँग डेटमा गएको थिएँ र उनले मसँग शरिरिक सम्बन्ध बनाउनको लागि तयार भइन् । तर म उनीसँग बिताएको रातलाई कहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ किनभने उनले जब मेरो दुईवटा लिङ्ग देखिन् तब उनी निकै ठूलो आवाज निकालेर हाँस्न थालिन् । मैले सर्जरीद्वारा दुईवटा लिङ्ग बनाएको उनले सोचिछिन् । त्यो रात ती महिलाले मेरो निकै खिल्ली उडाइन् । उनका प्रत्येक शब्दहरु वाँणको रुपमा घोचेको थियो तर के गर्नु मलाई त्यसको बानी परिसकेको थियो ।
कहिले तनावमा भए जोन ?
जोनले आफ्नो जीवनीमा लेखेका छन्, ‘मेरो जिन्दगीमा एउटी महिला आइन् जसलाई म वास्तविक रुपमा प्रेम गर्दथेँ ।
हामीले तीन महिनासम्म अलग–अलग ठाउँमा भेट्यौँ । मौका मिलेको खण्डमा हामीले एक–अर्कालाई किस पनि गर्ने गर्दथ्यौँ र उनलाई अंकमाल पनि हाल्ने गर्दथेँ । उनी पनि मलाई प्रेम गर्न थालेकी थिइन् । एक दिन मैले उनीसँग आफू अरु पुरुषहरुभन्दा निकै अलग भएको बताएँ । उनले आफूलाई त्यस्तै लागेको बताइन् । मैले आफ्नो शरिर अरु पुरुषहरुको जस्तो नभएको बताउँदा उनेले आफूलाई त्यस्तो कुराले केहि पनि फरक नपार्ने भन्दै मलाई बिश्वस्त पारिन् । जोन अझ भन्छन्,‘ एक रात जब हामी नजिक भयौँ र म उनको अगाडि निर्वस्त्र भएँ तब उनी निकै आतंकित हुँदै मलाई ‘गेट आउट’ भनिन् र मसँगको सम्बन्ध तोडिदिइन् ।
त्यसपछि उनले मसँग कहिले पनि भेटिनन् ।’ उनका अनुसार उनको बाल्यकाल निकै पिडादायी तरिकाले बित्यो । जोनको लागि सबैभन्दा दुखदायी पल त्यो हुन्थ्यो जब उनी साथीहरुसँग खेल्न बाहिर निस्कन्थे । उनलाई उनका साथीहरुले निकै जिस्काउने गर्दथे । साथीहरुले दिने मानसिक तनावबाट बच्नका लागि उनी घरमा एक्लै बस्न थाले र पछि आमा–बुवालाई आफू अब पढ्न पनि नजाने भन्दै आफ्नो निर्णय सुनाए । यो कुरा जोनले त्यतिबेला भने जब उनी प्राइमरी कक्षामा पढ्ने गर्दथे । स्कूलको ट्वाइलेटमा पिसाव फेर्न जाँदा साथीहरुले उनलाई देखेर जिस्काउन सुरु गरेका थिए ।
उनी आमा जोनको यस्तो व्यवहारप्रति निकै चिन्तित हुँदै उनलाई अहिले नसम्हालेर डिप्रेसनमा जाने भन्दै उनलाई त्यसबाट निकाल्नको लागि अनेकौँ उपाय अपनाउन थालिन् । एकदिन जोनकी आमाले उनलाई सबै प्रश्नहरु सोध्न थालिन्, उनको हरेका जवाफमा घुमिफिरी एउटै कुरा आउँथ्यो, ‘किनभने मसँग दुईवटा लिङ्ग छ त्यसकारण म यो समाजको लागि लायक छैन र संसारमा ममाथि हाँस्दछ । ’
जोनकी आमाले उनलाई सान्त्वना दिँदै भनिन्, ‘छोरा, तिमी यसलाई आफ्नो कमजोरी नबनाउ । यो इश्वरको देन हो । भगवान् सायद तिमिलाई निकै धेरै माया गर्छन् त्यसकारण तिमिलाई अतिरिक्त पेनिस दिएका छन् । यसमा लाजको केहि कुरा छैन ।
एकचोटी बिचार गर, तिमी संसारको सबैभन्दा अलग बालक हौ र यसलाई तिमीले आफ्नो ताकतको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ ती बालकले आफ्नी आमाको वाणीलाई ध्यानमा राखेर त्यसपछिका दिनमा आफ्नो शारिरप्रति कहिले पनि गुनासो गरेनन् । यहाँ अब हामी तपाईंलाई उनको समस्याको बताउँदैछौँ जसले सबैको आँखामा पानी ल्याइदिनेछ । इन्टरनेटमा सोधिएको प्रश्नमाथि उनले दिएको जवाफ यस्तो छः
प्रश्न १ – तपाईंलाई पाइन्टमा फिट हुन समस्या हुँदैन ?
जोनः हो, समस्या हुन्छ तर अब बानी परिसकेको छ । कहिलेकाँही बाइक चलाउँदा र अचानक कतै बस्नाले निकै पिडा हुने गर्दछ । सबैभन्दा धेरै समस्या गर्मी मौसममा हुने गर्दछ ।
प्रश्न २ – तपाईंलाई साथीहरुबाट कस्तो प्रकारको कमेन्ट आउँथ्यो ?
जोनः जब–जब अंग्रेजी अक्षर डी को कुरा आउँथ्यो तब साथीहरु मतर्फ हेरेर हाँस्ने गर्दथे । साथीहरु मलाई डबल डी भनेर बोलाउने गर्दथे । कतिपटक त मलाई उनीहरुले आफूसँग खेल्न पनि बञ्चित गर्ने गर्दथे ।
प्रश्न ३ – के तपाईं सार्वजनिक स्थलमा शौचालयको प्रयोग गर्नुहुन्छ ?
जोनः जहाँसम्म सम्भव हुन्छ, म सार्वजनिक शौचालयको प्रयोग गर्दिनँ । मलाई लाग्छ कि यदि सँगैको मानिसले मेरो बारेमा थाहा पाएको खण्डमा उनको प्रतिक्रिया जे पनि हुनसक्छ । म हरेक दिन आफू हाँसोको पात्र बन्न चाहन्न ।
प्रश्न ४ – तपाईं कसरी पिसाब फेर्नुहुन्छ ?
जोनः दुबै पेनिसबाट पिसाव फेर्छु । यति मात्र होइन, यौन सम्बन्ध बनाउनको लागि पनि दुबै लिङ्गको प्रयोग गर्छु ।